ULIMI ISpanishi Isi-Albania Isi-Amharic Isi-Arabhu Isi-Armenia Isi-Efik Isi-Estonia Isi-Ewe Isi-Iceland Isi-Igbo Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Ukraine IsiBhunu IsiBislama IsiBulgaria IsiCebuano IsiChewa IsiCroatia IsiCzech IsiDanishi IsiDashi IsiFinishi IsiFulentshi IsiGeorgia IsiGreki IsiHebheru IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJalimane IsiJapane IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiMacedonia IsiMalagasy IsiMyanmar IsiNgisi IsiNorway IsiNtaliyane IsiPangasinan IsiPedi IsiPolishi IsiPutukezi IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbia (SesiRoma) IsiShayina SesiMandarin (Esenziwe Lula) IsiShayina SesiMandarin (Sezinhlamvu Zakudala) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (SaseLesotho) IsiSwahili IsiSwidi IsiTagalog IsiTahiti IsiThai IsiTigrinya IsiTonga IsiTsonga IsiTswana IsiTurkey IsiTwi IsiXhosa IsiZulu
Umthetho owubekele umkhaya wakho uthi ngo-9:00 ebusuku omakhalekhukhwini bayacishwa, kodwa kuze kwaba kabili kuleli sonto uthola indodakazi yakho ithumelelana nothile imiyalezo ngemva kwamabili. Indodana yakho wayibekela umthetho wokuthi lingadluli ihora leshumi ebusuku ingakabuyi ekhaya, kodwa izolo iphinde yabuya sekudlule ele-11:00.
Ingane yakho ingenza kangcono kunalokho. Kodwa okokuqala kudingeka wazi ukuthi kungani ibonakala iyishaya indiva imithetho yakho. Ungalilahli ithemba. Lokho okubonakala kuwukungalaleli ngokuphelele kungase kube yinto encane nje.
Imingcele engacacile. Ezinye izingane ziyishaya indiva imithetho ukuze nje zibone ukuthi kuzokwenzekani. Ngokwesibonelo, uma umzali ethe isenzo esithile esingalungile siyoholela esijezisweni, ingane ingase isenze ukuze ibone ukuthi umzali uzonamathela yini ezwini lakhe. Ingabe izingane ezinjalo zingamahlongandlebe? Akunjalo ngempela. Iqiniso liwukuthi, izingane zithambekele ekungayilalelini imithetho uma abazali benganamatheli ekukhipheni isijeziso noma imingcele ingacacile kahle.
Isandla esiqine ngokweqile. Abanye abazali bazama ukulawula izingane zabo ngokuzibekela uhide lwemithetho. Uma ingane ingalaleli, umzali uyathukuthela abese enezela eminye imithetho. Kodwa ngokuvamile, lokhu kwenza isimo sibe sibi nakakhulu. Incwadi ethi Parent/Teen Breakthrough ithi: “Njengoba uzama ukuqinisa isandla enganeni yakho, ivele ibe yisijaka nakakhulu. Ukuqinisa isandla kufana nokuzama ukugcoba isinkwa ngebhotela eliqinile: sivele sihlephuke futhi ukulicindezela kakhulu ngeke kusize.”
Isiyalo esifanele singasiza. Ngokungefani “nokujezisa”—okusho ukuzwisa umuntu ubuhlungu—“isiyalo” ngokuyinhloko sisho ukufundisa. Khona-ke, ungayifundisa kanjani ingane ukulalela imithetho yakho?
Makucace okushoyo. Izingane kudingeka zikwazi kahle okulindeleke kuzo nokuthi uyoba yini umphumela wokungalaleli.—Isimiso seBhayibheli: Galathiya 6:7.
Icebiso: Bhala uhlu lwemithetho yasekhaya. Ngemva kwalokho zibuze: ‘Ingabe ngibeke imithetho eminingi kakhulu? Ingabe ngibeke embalwa kakhulu? Ingabe eminye ayisadingeki? Ingabe ngingayihlela yini kabusha ngokuvumelana nezinga lokwethenjelwa ingane yami eye yalibonisa?’
Ungaguquguquki. Izingane zingase zidideke uma zingazange zijeziswe lapho zenze okuthile ngesonto eledlule kodwa bese zijeziswa kuleli sonto ngenxa yephutha elifanayo.—Isimiso seBhayibheli: Mathewu 5:37.
Icebiso: Zama ukwenza isijeziso sihambisane kakhudlwana “necala.” Ngokwesibonelo, uma ingane ingabuyanga ngesikhathi esibekiwe, ukuyijezisa ngokuba isheshe ibuye nakakhulu kuyahambisana necala.
Bonisa ukucabangela. Yiba umzali ovumelana nezimo ngokunikeza ingane inkululeko eyengeziwe uma yenza kahle.—Isimiso seBhayibheli: Filipi 4:5.
Icebiso: Hlala phansi nengane nixoxe ngemithetho. Ungase uyicele nokuba iveze uvo lwayo ngesijeziso okufanele sikhishwe uma kuphulwe imithetho ethile. Intsha ithambekela kakhudlwana ekuyilaleleni imithetho ebe nengxenye ekubekweni kwayo.
Hlakulela ukuvuthwa enganeni. Umgomo wakho akukona nje ukwenza ingane ilalele imiyalo yakho kodwa ukuyisiza ihlakulele unembeza omuhle—umuzwa wangaphakathi wokulungile nokungalungile. (Bheka ibhokisi elithi “Yakha Izimfanelo Ezinhle.”)—Isimiso seBhayibheli: 1 Petru 3:16.
Icebiso: Thembela osizweni lweBhayibheli. Liwumthombo ongcono kakhulu ‘wesiyalo esinika ukuqondisisa,’ futhi ukuhlakanipha kwalo ‘kunganika ongenalo ulwazi ukukhalipha, nensizwa [noma intombi] ulwazi nekhono lokucabanga.’—IzAga 1:1-4.
“Izwi lenu elingu-Yebo malisho uYebo, u-Cha wenu, asho uCha.”—Mathewu 5:37.
YAKHA IZIMFANELO EZINHLE
Siza ingane yakho ukuba icabange ngezimfanelo engathanda ukwaziwa ngazo. Lapho ibhekene nezinselele, intsha ingafunda ukwenza izinqumo ezinhle ngokuzibuza le mibuzo elandelayo:
Hlobo luni lomuntu engifuna ukuba yilo?—Kolose 3:10.
Yini umuntu onobuntu obunjengobukaKristu abengayenza uma ebhekene nale nselele?—IzAga 10:1.
IBhayibheli linezibonelo eziningi ezingokoqobo zamadoda nabesifazane abenza izenzo ezabaveza njengabantu abahle noma ababi. (1 Korinte 10:11; Jakobe 5:10, 11) Sebenzisa lezi zibonelo ekusizeni indodana noma indodakazi yakho yakhe izimfanelo ezinhle.
Meyi 2013 | Zivikele Ebugebengwini!
PHAPHAMA! Meyi 2013 | Zivikele Ebugebengwini!